YBY 031 Lipo Foams & backboard BBL post ịwa ahụ na-enye ezigbo maka mgbake liposuction 360 kechie mkpuchi.
LIPO & BBL POST Surgery SUPPLIES KIT: Ngwaahịa abụọ a Post Op ịwa ụfụfụ bụ ihe dị mkpa maka ngwa ngwa, enweghị mgbu & nsonaazụ kacha mma maka Liposuction ọ bụla na mgbake bbl.
Zenarị MGBE MGBE ỌZỌ, Ọ BỤGHỊ mgbu na ụfụfụ anyị maka BBL mgbe a wachara ya ahụ.Nhazi anatomical ya na-akọwa ma na-emepụta mkpakọ lumbar.Iji bọọdụ lipo azụ a na-eme ihe mgbe niile na-egbochi njide mmiri na mpaghara lumbar.
Ọ BỤGHỊ MMỤTA ma ọ bụ akara n'akpụkpọ ahụ: Mpempe ụfụfụ lipo anyị na-enye otu ụfụfụ ụfụfụ dị nro mgbe ịwa ahụ gasịrị.Ọ dị mma maka ogwe aka, agba, afọ, apata ụkwụ ma ọ bụ mpaghara ọ bụla ọgwụgwọ edo dị mkpa maka nsonaazụ dị elu mgbe arụchara ọrụ.Epi ụfụfụ na bọọdụ mgbe lipo Ibé akwụkwọ.
Jikwaa ọzịza ahụ mgbe ị na-agwọ, na-amachi ọnụ ọgụgụ edema nke na-etolite ma mee ka mkpebi ya dị ngwa site na nrụgide igwe.Ọ na-ebelata ọnụọgụ ọnya na Ọ na-enyere akpụkpọ ahụ dị nro aka n'ịweghachi ma ọ bụ na-ebelata.
Anyị na-eguzo n'ụzọ zuru ezu n'akụkụ ngwaahịa anyị wee gosi ya 100% "Hụ ya n'anya ma ọ bụ hapụ ya nkwa" ma ọ bụrụ na ọ nweghị ihe kpatara na ị hụghị ụfụfụ lipo anyị na bọọdụ naanị weghachi ya maka nkwụghachi ma ọ bụ mgbanwe zuru oke.Nye anyị nwaa, ọ nweghị ihe egwu 100% na anyị maara na ị ga-ahụ ya n'anya.Pịa Tinye ka ụgbọ ala ugbu a!
Chekwaa Usoro gị N'ime izu mgbake mbụ ka BBL gachara, ime mkpebi na-ezighi ezi nwere ike imetụta ogo nsonaazụ gị kpamkpam.Bọọdụ bbl na ngwugwu ụfụfụ na-eme karịa inye nkasi obi.Ọ dị ezigbo mkpa ijide n'aka na usoro ahụ na-arụpụta nsonaazụ chọrọ.
Ụfụfụ ọgwụ 3-Pack Lipo a na-enye aka n'ịgbakwunye mkpakọ, contour na igbochi faja creases #1 ndị dọkịta na-akwado ụfụfụ lipo na bọọdụ mgbe lipo gasịrị.
Yiri bọọdụ Lumbar a n'ime uwe mkpakọ liposuction ga-eme ka ọ nwee ọganihu mgbake nke BBL (Brazil Butt Lift), azụ liposuction ma ọ bụ usoro lipo.Na-egbochi mmụba mmiri ma mepụta njiko.
Naghachi mgbe BBL & liposuction na azụ osisi molder & lipo foams na-eme ya niile.Bọdụ ụfụfụ liposuction na-ebuli mgbake site na:
1.Soothing ultra mmetụta anụ ahụ
2.Na-egbochi njide mmiri
3.Kicking akpụkpọ mpịachi n'azụ ọgwụgwụ
4.Anaghị ahapụ otu ọnyà
5. nweta nsonaazụ ị chọrọ, na ngwugwu BBL & Lipo anyị
ANYỊ na-eguzo n'ụzọ zuru ezu na ngwaahịa anyị wee gosi ya 100% "Hụ ya n'anya ma ọ bụ hapụ ya nkwa" ma ọ bụrụ na ọ nweghị ihe kpatara na ị hụghị ụfụfụ lipo anyị na bọọdụ naanị weghachi ya maka nkwụghachi ma ọ bụ mgbanwe zuru oke.Nye anyị nwaa, ọ nweghị ihe egwu 100% na anyị maara na ị ga-ahụ ya n'anya.Pịa Tinye ka ụgbọ ala ugbu a!
Nke gara aga: YBY-033 Tummy Tuck & Lipo Foam Ab board na-egbochi mbufụt + njide mmiri.
Osote: Lipo Ab Board Post Surgery Liposuction BBL Foam na-enye bọọdụ mkpakọ afọ ime 360 ​​na ụfụfụ na-edobe bọọdụ afọ afọ mgbe Lipo Backboard gbakere.